Faahfahin: dagaallo kharaar oo maanta ka dhacay Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Duqayntaan waxa ay noqonaysaa tii saddexaad ee degaanada maamulka Galmudug ka dhacda seddexdii todobaad ee la soo dhaafay, ayadoona jab wayn lagu gaarsiiyay kooxda Al-shabaab.
XARARDHEERE, Soomaaliya - Ciidamada qaranka iyo kuwa galmudug oo is-kaashanaya ayaa saakay weerar ku qaaday saldhigyo ay kooxda Al-shabaab ku lahayd inta u dhexeeya deegaanka Qaycad iyo degmada Xarardheere ee gobolka Mudug.
Wararka ayaa sheegaya in dagaalka lagu qaaday aagga Qaycad ay qayb ka ahaayeen diyaarado, kuwaas oo duqaymo la dhacay fariisinada kooxada Al-shabaab oo la sheegay in xiligaas ay ku sugnaayeen hogaamiyaal sar sare, kadibna ciidamada huwanta ah ay gudaha u galeen saldhigyada kooxda.
Lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha ka dhashay dagaalka iyo duqaynta saakay, hayeeshee waxaa la sheegayaa in weli xiisadda dagaalku ka taagan tahay aagga u dhexeeya Qaycad iyo Xara-Dheere.
War ka soo baxay Galmudug ayaa lagu yiri, “Dagaal iyo duqayn dhanka cirka ayaa ka socota saldhig kale oo kooxda argagixisada Shabaab ay ku lahaayeen aagga u dhexeeeya Qaycad iyo Hareere Dheere, ayadoo ciidamada qaranka iyo kuwa Galmudug ay hadda galeen saldhigga la duqeeyey”.
Deeganada dhaca koonfurta Mudug ayaa todobaadyadii la soo dhaafay waxaa ka socday Dagaal ka dhan ah kooxda Al-shabaab, waxaana dagaalka iska-kaashanaya ciidamada Qaranka, kuwa Galmudug, iyo diyaaradaha dagaalka maraykanka oo duqaymo la beegsaday saldhigyada ay ku suganyihiin hogaamiyaasha kooxda.